Egbe Nje clamps Manufacturers na Suppliers | China egbe Nje clamps Factory
UV na temparature merela agadi ule
High voltaji nkwusioru mwekota na-mepụtara na-akwado onye na-eduzi na insulators na efefe nnyefe e. Iji jikọọ ike USB na insulator.
Nke a ike akara ngwaike na-eji na AAAC, ACSS, ACSR, iferi kpuchie ụdị nnyefe na-eduzi.
The na-akwado clamps na-abụghị nanị n'ihi na elu voltaji eletriki nnyefe edoghi, kamakwa ha na-eji na eriri optic Gịnị (OPGW - ngwa anya n'ala wires) na ADSS (niile na-dielectric na-akwado onwe), na-agụnye preformed mkpara. Nke a na ozi na-egosi na eriri optic nkesa ebe anyị na saịtị weebụ.
The nkwusioru clamps chebe USB mgbe echichi ibu, ịchịkwa ngagharị nke ọnọdụ nke na-eduzi ya megide ifufe na oscillation, vibration, ma belata eletriki nchegbu. Ntọhapụ nke kpọmkwem ibu a na-achịkwa axial adịgide, nke ike-kpomkwem gbanwee iji nagide chọrọ ike nke elu voltaji eletriki efe n'elu USB.
The elu voltaji nkwusioru nzukọ nwere ike awa na anya anya, osisi kwesịrị ekwesị, ị-clevis, anya clevis dị ka ndị ahịa chọrọ.
The nkwusioru mwekota eji ebe nnukwu ike ibu nwere ike ime. Nsogbu proofed imewe, na elu na-ike ọcha belata ihe ize ndụ nke mmebi nke efefe ike akara.
High voltaji nkwusioru clamps na-mere nke
* Na-ekpo ọkụ itinye kpaliri anwụ casted ígwè
* elu ike corrosion eguzogide aluminum alloys
The clip ka nke aluminum alloy ma ọ bụ ductile ígwè.
Hardware - ekpo ọkụ itinye kpaliri ígwè
High voltaji nkwusioru ngwa gabiga corrosion eguzogide, okpomọkụ ịgba ígwè na merela agadi ule.
Aluminum bolted Nje mwekota
Erughị ala mwekota JR-85
Casted Iron bolted Type Nje mwekota
Obere cable sịrị chọrọ Comcast investigat ...
A otu na-anọchite anya obere eriri optic cable ọkọnọ sịrị chọrọ Comcast nyochaworo n'elu boro ọ ịṅụbiga ya ike n'ime ụlọ ọrụ. The American USB Association (ACA) na-anọchi anya karịrị 700 obere na mediu ...
Obi ụtọ na New Year amụọ
Obi ụtọ na iji gwa ya na site 10.12.2018 na 31.01.2018 na atụmanya nke New Year anyị malitere BIG nkwalite. Anyị na-ekele gị, na-akwado gị site n'inye extra discounts metụtara uru iji ke USD. 30 000 USD ...
Graphene maka ọdịnihu nke telekomunikashions
Researchers n'ime Graphene flagship oru ngo, otu n'ime ndị kasị research atumatu nke European Commission, gosiri na ike Graphene dabeere photonic ngwaọrụ-enye a pụrụ iche ngwọta maka ọzọ generat ...
Mere telecom na enye ọrụ na-explori ...
The ahịa isi na-ugbu a aku ọtụtụ pilot na mmepụta oru na-mkpali maka n'ihu ọhụrụ. Emepe emepe mbara azum maka ngwa nke akpịrị na sistemụ na-enyere ọhụrụ ...